Dowladaha Masar iyo Suudaan oo soo bandhigay dhoola tuska Ciidanka Cirka | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladaha Masar iyo Suudaan oo soo bandhigay dhoola tuska Ciidanka Cirka
Dowladaha Masar iyo Suudaan oo soo bandhigay dhoola tuska Ciidanka Cirka
Ciidamada cirka ee Masar iyo Suudaan ayaa Arbacadii si wadajir ah jimicsi ugu qabtay waqooyiga Suudaan, sida ay warisay warbaahinta dowladda ee Masa.
Dhoolatuskan oo loogu magac daray “ Gorgorka Nile-ka labaad,” ayaa lagu qabtay Saldhigga Cirka ee Meroe ee dalka Suudaan, waxaana loogu talagalay in lagu wanaajiyo xirfadaha ciidamada si ay u fuliyaan hawlgallada cirka ee wadajirka ah, sida Al-Ahram ka soo xigatay ciidamada qalabka sida ee Masar.
Mohamed Othman, oo ah madaxa shaqaalaha ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan, saraakiil sar sare oo ka socda Suudaan iyo qaar ka mid ah taliyayaasha sarsare ee ciidamada cirka Masar ayaa la sheegay in taba barada ay baxaayaan.
Masar iyo Suudaan waxay qabteen wajigii koowaad ee dhoola tus wadajir ah Nofeembar 15, 2020-kii, kaasi oo loogu magic daray ” Gorgorkii Nile-ka koobaad”.
Previous articleMadaxweynaha Dowlada Hirshabelle oo safar ku tagay degmada Warsheekh
Next articleMadaxweynaha Puntland & Safiirka Sweden oo ka wada hadlay khilaafka ka taagan doorashada